स्वास्थ्य मन्त्रालयमा साढे २५ करोड रकमान्तर -
३ बैशाख २०७५, सोमबार ०६:३९ 195 पटक हेरिएको
काठमाडाैँ ३ वैशाख | स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले योजनाविहीन विषयमा साढे २५ करोड रकमान्तर गरेपछि विवाद भएको छ । राज्यमन्त्री अर्यालले योजनाविहीन विषयमा रकमान्तर गर्न दबाब दिएको मन्त्रालयका अधिकारीको गुनासो छ ।
पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले विनाशीर्षक खाली चेकमा रकम हाल्न नमिल्ने बताए । ‘अत्यावश्यक परेको खण्डमा विनियोजित बजेटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता गराउन सकिन्छ । त्यो पनि मन्त्रालय र मन्त्रीले चाहेर सक्दैनन् । कुन योजनाका लागि आवश्यक परेको हो, त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले उपयुक्त ठानेर स्वीकृति दिएको खण्डमा मात्रै फिर्ता गराउन सकिन्छ,’ डा. कोइरालाले भने, ‘विनियोजित रकम फिर्ता गर्दा आयोगको सहमति अनिवार्य चाहिन्छ । कुनै शीर्षकविना रकमान्तर गरी खाली चेकमा पैसा हाल्न लगाउनु आर्थिक अनियमितता हो ।’ उनले औजार तथा उपकरण आवश्यक परेको स्वास्थ्य संस्था देखाउन नसक्नु नै मन्त्रालयको गम्भीर गल्ती भएको बताए । नयाँ पत्रिकाबाट